Nampitodika ny Loha ny Hetsika Mitaky Fandriampahalemana Teraka Tany Ambanivohitra Afghan Anivon’Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2018 16:50 GMT
Sary: Mohmmad Omar Lemar. Nahazoana alalana. Mponina ao amin'ny faritany Helmand atsimo nanatontosa diaben'ny fandriampahalemana.
Indrisy fa zava-mitranga mahazatra ny fiara voasesika baomba mipoaka ao amin'ny faritany mora mirehitra ao Helmand, Afghanistan, saingy nisy zava-tsy nampoizina ny vokatry ny fipoahana nitranga vao haingana izay.
Tao Lashkar Gah, renivohi-pitantanan'i Helmand, izay fantatra ho toerana nipoirina voalohany ny vondrona Taliban sy foiben'ny famokarana opioma (zava-mahadomelina), fiara iray nisy bomba no nipoaka nandritra ny fifaninanana tolona, ka nahafatesana olona 14 sy naharatrana am-polony.
Ny ampitson'ny fipoahana tamin'ny 23 marsa, mponina an-jatony tao Helmand no nanomboka nanao toby sit-in, mitaky roa andro fampiatoana ny ady eo amin'ny vondrona taliban sy ny governemanta afghan, ka mpikatroka teo amin'ny 30 no manao fitokonana tsy hihinan-kanina.
Na ny governemanta na ny vondrona Taliban samy nitsipaka ny fitakiana fampiatoana ady roa andro.
Tamin'ny antsafa (anterovava) nifanaovana tamin'ny New York Times, mpanao fitokonana iray antsoina hoe Qais Hashimi nampipoaka ny resaka nanondro ny taliban sy ny governemanta ho “saribakolin'ny vahiny”, ary koa izy :
Tsy manana rà intsony izahay, maina ny ranomasonay. Tsy hamoaka teny hafa intsony izahay. Tsy hihinana izahay.
Nampidirina hopitaly nandritra ny hetsika ny enina tamin'ireo mpanao fitokonana tsy hihinan-kanina .
Niditra an-tsehatra nony farany ireo mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny Oulémas (vaomieran'ny manam-pahaizana ara-pivavahana) ary nandrisika ireo mpanao fitokonana mba hamarana ny fitokonana tsy hihinan-kanina. Saingy nampanantena ny vaomiera fa hiasa miaraka amin'ny mpanao fihetsiketsehana mba hanery ny fampiharana ny fandriampahalemana.
Nanatevin-daharana ny sit-in ny vehivavy Afghan
Nanomboka ny toby sit-in azy manokana ihany koa ny vehivavy, izay zara raha mivoaka ny trano ao amin'ity faritany mpandala ny nentin-drazana ity, fihetsiketsehana firaisankina amin'ny fanoherana ny ady amin'ny fotoana tsy maharototra ny taliban amin'ny tolotra fifampiresahana ho amin'ny fandriampahalemana.
Miantso ny taliban hanao fifanarahana fandriampahalemana ny renim-pianakaviana iray ao Helmand, izay namoy zanaka lahy 18 taona nandritra ny fipoahana isan-joma.
Nampanantena hanatontosa diaben'ny fandriampahalemana hatrao amin'ny tanànan'i Musa Qala fehezin'ny taliban ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana izay niantso ny tenan'izy ireo ho “Hetsi-bahoaka”.
Sarotra sokajiana ho fehezin'ny “hery ivelany” na ireo “sangany ara-politika” ny hetsika, araka ny fanamarihana fohy avy amin'ilay mpisera Twitter, Sayed Madadi.
Mety hahomby na tsia ny fihetsiketsehana ao Helmand. Saingy misy zavatra mampiavaka azy amin'ny hafa: Tsy hetsiky ny sangany avy amin'ny tanora nahita fianarana tamin'ny tandrefana ao Kaboul izany. Fa hetsika tarihin'ny tambanivohitra Afghana izay nolazain'ny taliban fa nahazoany ny maha-ara-dalàna azy ireo, ny nivin'izy ireo, raha misy izany.
Antso ho amin'ny fandriampahalemana ao Helmand manakoako na aiza na aiza
Tsy ela dia niitatra tany amin'ny faritra hafa ao Helmand ny tobin'ny fandriampahalemana, nanatevin-daharana izany ihany koa tsinona ireo mponina ao amin'ny faritany Herat sy Farah ao andrefan'i Afghanistan. Avy eo tonga tany amin'ireo Afghana ao amin'ny faritra atsinanana, Paktia ihany koa ny hetsika, izay nahitana vondrona somary kelikely nametraka ny sit-in azy ireo manokana.
Kely vidy kokoa noho ny vidin'ny fahanginana ny vidin'ny fihetsiketsehana sivika manohitra ny ady. Very zavatra betsaka i Afghanistan tao anatin'ny efapolo taona noho ny tsy firaharahian'ny maro an'isa nitsangana hanohitra ireo mpanely ady, tambajotran-jiolahy mafia nasionaly sy iraisampirenena ary ireo mpanao trafika rongony. Mirehareha amin'ny fihetsiketsehan'ny olom-pirenena ao Helmand.
Raha tsy mitongilana na mirona na any amin'iza na any amin'iza, mametraka fanerena vaovao amin'ny taliban ireo toby manao sit-in ireo rehefa niezaka ny hanolo-tanana amin'ny tolotra fandriampahalemana malala-tanana ny filoha afghan Ashraf Ghani tamin'ny faran'ny volana Febroary.
Ahitana fankatoavana ny vondrona Taliban ho toy ny antoko ara-politika, fanafahana ireo Taliban gadra ary ezaka hamafa ireo mpitarika taliban ao anatin'ny lisitra mainty mahazo sazy iraisampirenena ny tolotra natao ambony latabatra.
Saingy mbola tsy nanome valinteny ofisialy amin'ny tolotr'i Ghani ny vondrona Taliban.